गाँजासँग जोडिएको समृद्धि
गाँजासँग जोडिएको समृद्धि नेपालमा पनि गाँजा वैध हुनासाथ यो नै नेपालको पहिलो ठूलो बाली हुने उत्तिकै संभावना
मधेश दर्पण बुधबार, मंसिर २२, २०७८
अमेरिकाको तल्लो सदन कंग्रेसमा गत सोमबार अमेरिकाको ऐनमा गा‘जालाई लागू पदार्थको लिस्ट ( Controlled Substance Act CSA) बाटै हटाएर (रिसिडुअल हैन, डिसिडुअल) सामान्य अन्य बालीसरह मान्यता दिने नयाँ विधेयक दर्ता भएको छ । अमेरिकाको संघस्तरमा गा‘जा अझै प्रतिवन्धित छ । ३८ राज्यमा वैध छ र १८ राज्यमा गाँजा किनेर खान पाइन्छ ।
गाँजा अमेरिकाको वैध रूपमै पाँचौ प्रमुख नगदे बाली हो । मकै, भटमास, घाँस, गहुँपछि गाँजा खेतिको मूल्य ठूलो छ । त्यहाँ गाँजाको खेति वार्षिक ६.२ अर्ब डलर (करिब रू ७ खर्ब) को छ । विभिन्न नियन्त्रण र प्रतिवन्ध हुँदाहुँदै पनि यति ठूलो योगदान छ भने नियन्त्रण हट्नासाथ प्रथम बाली हुने टड्कारो संभावना देखिन्छ ।
नेपालमा पनि गाँजा वैध हुनासाथ यो नै नेपालको पहिलो ठूलो बाली हुने उत्तिकै संभावना देखिदै छ । त्यो दिनदेखि गरिब कुनाकाप्चाका किसान धनि हुन सुरू गर्नेछ । सरकारले पनि राजश्व मनग्गै उठाउन थाल्नेछ र विकासका लागि कडा सर्तमा बजेट जुटाउन बिदेशी दाताको पाउ मल्नुपर्ने छैन । तत्कालिन अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री मार्गरेट पी गार्फिल्डले २०३४ भदौ ३ गते राजा वीरेन्द्रलाई भेटेर नेपालमा गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने नत्र नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पर्ने चेतावनीसहितको जिम्मी कार्टरको विशेष सन्देश सुनाएपछि गाँजामाथि नेपालले प्रतिबन्ध लगाइएको रहेछ ।
२०३५ वैशाख ७ गते राजा वीरेन्द्रले जिम्मी कार्टरलाई ‘गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि जनताको आयस्रोत गुमेर झन् गरिब भएको र प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न आफूलाई अनुरोध आएको’ बेहोराको चिठी लेखेका थिए। तर अमेरिकाले वास्तै गरेन । गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाललाई गाँजाबाट हुने आयस्रोत त बन्द भयो नै, गाँजासम्बन्धी मुद्दामा गरिबहरूलाई कारागारमा राख्नुपरेकाले हरेक वर्ष करोडौँ रुपियाँ थप खर्च पनि भइरहेको रहेको छ ।
यससम्बन्धी विवरण ‘अडियन्स विथ किङ वीरेन्द्र — नार्कोटिक’ नामबाट विकिलिप्स रिपोर्टले बाहिर ल्याइदिएको रहेछ । (नेपाल, १५ चैत २०७६) अमेरिकाले गाँजालाई सामान्य बाली सरह मान्यता दिने गरी नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । उसले नै विश्वभरि गाँजा प्रतिबन्ध लगाउन लगायो । प्रतिवन्धित अवधिमा नै सारा रिसर्चहरू समेत गरेर पेटेन्ट र प्रोपर्टी अधिकार पनि कब्जा गरिसकेको छ ।
नेपाल ट्वाँ पर्दैछ । एक वर्ष भयो संयुक्त राष्ट्र संघले गाँजा कडा लागू पदार्थ हैन औषधीय वनस्पति हो, वैध गरेर उपयोग गर्न पाउछ भनेर महासन्धि पास गरेको छ । नेपालले यो प्रस्ताव पास गर्न निर्णायक १ मत दिएको हो तर त्यसपछि अहिलेसम्म चुँ बोलेको छैन । आफ्नो श्रोत विगत साढे ४ दशकसम्म नखोल्दा पनि चुँ बोलेनन्, अहिले त्यो श्रोत पाउदा पनि चुँ गर्दैन । यति लाछी सरकार, प्रशासन र नेताहरू भएको मुलुक नेपाल छ ।
यदि यी नेताहरू र दलहरू यसमा चाँसो दिएर लाग्दैनन् भने अब जनता नै जागेर नयाँ दल खोलेर गाँजालाई खुला गर्न किन न जुर्मुराउने ? कच्चा गाँजामा THC हुदैन, तर यसलाई केही अतिरिक्त फाइदाहरूको लागि उपभोग गर्न सकिन्छ । केही उदाहरणहरू छन्ः
एमेच्योर भांग प्रयोगकर्ताहरूलाई भांगको भित्री कार्यहरू थाहा नहुन सक्छ । उनीहरूलाई थाहा छैन कि “उच्च” अनुभवको लागि मुख्य तत्व गर्मी हो, जसले कम्पाउन्ड THCA लाई THC मा रूपान्तरण गर्छ, त्यसैले कसैले आफ्नो मिठाईमा कच्चा गाँजा थप्ने प्रयास गर्न सक्छ र केही प्रकारको फाइदाको आशा गर्न सक्छ ।
हालका वर्षहरूमा, मानिसहरूले भांगको बोटको अन्य भागहरूमा चासो लिएका छन्, THC लाई उनीहरूको फोकसबाट हटाउँदै । त्यहाँ बिरुवामा विभिन्न प्रकारका तत्वहरू छन् जुन फाइदाहरू छन्, कहिलेकाहीं रहस्यमय, किनभने तिनीहरू सबै अध्ययन गरिएका छैनन् । यी यौगिकहरू र टर्पेनहरू प्रचुर मात्रामा र धेरै भिन्न हुन्छन्, जहाँ अनुसन्धानकर्ताहरूलाई थाहा हुँदैन कि त्यहाँ कति छन् र तिनीहरूका प्रभावहरू पूर्ण रूपमा के छन्।
काँचो भांगको उपभोग गर्दा तपाईंलाई उच्च प्राप्त हुँदैन र सबैभन्दा स्वादिष्ट अनुभव हुनेछैन, यो पातदार सागहरू खाने जस्तै हो । जब बिरुवाले कुनै मनोवैज्ञानिक प्रभावहरू उत्पादन गर्दैन, यसले तपाईंको प्रणालीमा भिटामिन, खनिज र क्यानाबिनोइडहरू प्रदान गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।
भांगको बोटमा THC प्रभावकारी हुनको लागि – उच्च र आराम वा रचनात्मकताको अनुभूति प्रदान गर्दै – बोटलाई डेकार्बोक्सीलेसन प्रक्रियाबाट गुज्रनु आवश्यक छ । यो धेरै नियोफाइट क्यानाबिस शेफहरूले खाना पकाउनु अघि छोड्ने चरण हो । डेकार्बोक्सीलेसन तब हुन्छ जब तपाइँ बिरुवामा तातो लगाउनुहुन्छ, चाहे जोइन्ट धुम्रपान गर्दा वा भांगलाई तपाइँको खानेकुरामा थप्नु अघि पहिले तातो गर्दा ।
यसको प्राकृतिक अवस्थामा, भांगमा कुनै THC छैन । यसको सट्टामा यसमा त्ज्ऋब् भनिने एक कम्पाउन्ड छ, जुन एन्टि–इन्फ्लेमेटरी गुणहरू, मस्तिष्क स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन, कोशिकाहरूको प्रसार, र क्यान्सर कोशिकाहरूको वृद्धि र फैलावटलाई पनि ढिलो बनाउँछ ।
तैपनि, तपाईले भांग अनुसन्धानमा जतिसुकै लगानी गर्नुभयो, त्यहाँ कुनै वैज्ञानिक प्रमाण छैन जसले ग्यारेन्टी दिन्छ कि काँचो बिरुवाको सेवनले एन्टि–इन्फ्लेमेटरी गुणहरू र यससँग जोडिएको अन्य फाइदाहरू प्रदान गर्दछ । जे होस्, भांग काँचो खाएमा, तपाईंले कुनै पनि अन्य हरियो र पातदार बोट खानुको समान फाइदाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ ।
यदि तपाईं भांग खानमा रुचि राख्नुहुन्छ र यसलाई चुनौतीपूर्ण लाग्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले प्रयास गर्न सक्ने केही विकल्पहरू छन् । जबकि कोही यसलाई सलादमा वा तिनीहरूको भाँडामा गार्निशको रूपमा थप्न इच्छुक छन् (किन?!), रस निकाल्नु सबैभन्दा सरल तरिका हुन सक्छ। यस प्रक्रियाले पातहरू, काण्ड र कोपिलाहरू सहित सम्पूर्ण भांगको बोटको फाइदा लिन्छ, र कच्चा गाँजाको स्वाद राम्रो बनाउने तरिका खोज्नु भन्दा धेरै राम्रो विकल्पको लागि बनाउँछ ।
क्यानाबिसको रसमा बोटमा भएका सबै यौगिकहरू र गुणहरू हुन्छन् र तपाईंको स्वाद अनुसार मोल्ड गर्न सकिन्छ। तपाईं यसलाई अन्य फलफूल र तरकारीहरूसँग मिलाउन सक्नुहुन्छ, मिठासको लागि केही मह थप्नुहोस् र स्वस्थ र स्वादिष्ट चीजको साथ अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ ।
आशा छ कि यो दृष्टिकोणले तपाईंलाई विभिन्न तरिकामा भांग प्रयोग गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यदि तपाइँसँग भांगका पातहरूमा पहुँच छ भने तपाइँसँग भांगको बोटमा पहुँच छ । आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्न निश्चित हुनुहोस्; पेय, चिया र कफीहरू इन्फ्युज गर्न, वा ककटेलमा चिसो र सुगन्धित ट्विस्ट थप्न र केही बेलुका पाहुनाहरूलाई वाह गर्नका लागि स्टिकहरू, डाँठहरू, पातहरू र यस्तै प्रयोग गर्न सकिन्छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २२, २०७८, १६:३४:००